नवजात शिशुमा निमोनिया भएको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् उपाय | Hamro Doctor News
नवजात शिशुमा निमोनिया भएको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् उपाय
काठमाडौं, २७ कात्तिक । आज विश्व निमोनिया दिवस, कोरोना महामारीकाबीच मनाइँदैछ । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको लक्षण मध्येको निकै गम्भीर लक्षण निमोनिया हो । यस अवस्थामा निमोनिया हुनबाट जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कोरोना संक्रमित बिरामीलाई गम्भीर प्रकारको निमोनिया भएर मृत्यु हुने सम्भावनालाई बढाइदिन्छ । त्यसकारण यो समय अन्य समयको तुलनामा बढी सचेत हुनु आवश्यक छ ।
निमोनिया श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धीत एक प्रकारको रोग हो । हाम्रो शरीरमा दुईवटा फोक्सो हुन्छन् । फोक्सोमा ठूलो श्वासनली, सानो नली, ब्रोंकाइलगायत विभिन्न खालका टिस्यु हुन्छन् । यिनै टिस्युमा कुनै कारणले संक्रमण भएर फोक्सोको कुनै क्षेत्र वा पूर्ण फोक्सोमा संक्रमण भएपछि हामीलाई निमोनिया हुन्छ । यस्ता संक्रमणले कहिले फोक्सोको तल्लो भागलाई त कहिले मथिल्लो भागलाई असर गरिरहेको हुन्छ । निमोनिया फरक–फरक कारणले लाग्छ । जसको एउटा मुख्य कारण कोरोना संक्रमण पनि हो । अर्को भने निमोनिया हुने कारण पहिले कारण पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ । भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगल्सका कारण संक्रमण हुने गर्दछ । यिनै संक्रमणसँग जुध्न नसकेपछि फोक्सोको नियमित काममा असर पर्छ । ब्याक्टेरिया, भाइरस वा फंगल्सले फोक्सोको प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट गर्छ र त्यसका टिस्युहरूमा संक्रमण फैलाउँदै जान्छन् । फोक्सोका टिस्युलाई संक्रमण गरेपछि पानी जम्ने, पिप जम्ने र कहिलेकाहीँ हावा जम्ने हुन्छ ।
हाम्रोमा कुनै उमेर विशेषको निमोनिया भएको देखिँदैन । विशेषगरी बालबालिका र वृद्धालाई बढी जोखिम भए तापनि युवाहरूमा पनि प्रशस्तै निमोनियाको संक्रमण भएको पाइन्छ । बच्चाहरूको फोक्सो पूर्ण रूपमा विकसित भइनसकेको हुँदा निमोनियाले सजिलै संक्रमण गर्न सक्छ । त्यसका साथै उनीहरूको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर हुने हुँदा सधैँ जोखिम समूहमा पर्छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा नवजात शिशु हुन्छन् । त्यसैगरी, उमेर ढल्कँदै गएका वृद्धको पनि फोक्सोका टिस्युहरूमा विभिन्न कारणले गर्दा असर पुगिरहेको हुन्छ । अझ उनीहरूमा कडा खालको दम, मुटुको रोगले पनि सताउने सम्भावना रहेको हुन्छ । यस्तो समस्या भएकालाई सामान्य चिसो वा रुघाखोकी लाग्दा पनि निमोनियाको संक्रमण चाँडै हुन सक्छ । स्वभावैले उमेर ढल्कँदै जाँदा रोगप्रतिरोधी क्षमतामा पनि कमी हँुदै जान्छ र निमोनिया संक्रमण चाँडै हुन्छ ।
त्यसमा पनि नवजातशिशुको श्वासप्रश्वास एक मिनेटमा ६० पटक भन्दा बढी चलिरहेको छ भने सचेत भइहाल्नुहोस् । किनकी यो निमोनियाको संकेत हुन सक्छ । जसमा नवजातशिशुको श्वासप्रश्वास छिटोछिटो भइरहे पनि परिवारका सदस्यले वेवास्ता गर्ने गरेको छन । ढिलोगरी अस्पताल ल्याउँदा शिशुको ज्यन नै जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन ।
लक्षण पहिचान गरौं
—नवजात शिशुको नाकको चुच्चो भाग, ओठ वा हात र खुट्टा निलो देखिन थाल्छ ।
बालरोग विशेषज्ञ डा. सूर्यनारायण यादवले निमोनियाको खतरा २ महिना भन्दा बढीको शिशुमा पनि हुनसक्ने बताए । तर, २ महिनादेखि १ वर्ष सम्मका बच्चाको श्वास प्रत्येक मिनेट ५० पटक भन्दा बढी चलिरहेको छ भने तुरुन्त डाक्टरसँग सल्लाह गरिहाल्नु पर्छ । यदि बच्चा १ वर्ष देखि ५ वर्षसम्मको छ र उसको श्वास प्रत्येक मिनेटमा ४० पटक भन्दा बढी चलिरहेको छ भने सावधान हुनु आवश्यक छ । नवजात शिशु बिरामी हुनु, ठूलो बच्चा वा वयस्क बिरामी हुनु भन्दा बढी खतरनाक हुन्छ । किनकी नवजात शिशुको इम्यून सिस्टम (रोगसँग लड्ने क्षमता) ठूलो मानिस वा बच्चाको तुलनामा निकै कमजोर हुन्छ । जन्मनासाथको शिशु एक यस्तो वातावरणमा आउँछ जहाँ चारैतर्फ विभिन्न किसिमका किटाणु, ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगस हुन्छन् ।